एलइडी खरिद विधिपूर्वक गर, लोडसेडिङ हटाऊ - UrjaKhabar एलइडी खरिद विधिपूर्वक गर, लोडसेडिङ हटाऊ - UrjaKhabar
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छल्दै भारतीय कम्पनीसँग दुई करोड थान ‘एलईडी’ चिम किन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका सम्बन्धमा कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर थुप्रैखाले प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न भएका छन् । सरकारले ‘लोडसेडिङ’ घटाउने उद्देश्यले उपभोक्ताहरूलाई आ–आफ्नो घरका चिम बदल्न लगाई सहुलियत दरमा कम वाटका एलईडी बिक्री गर्ने योजनामुताबिक उक्त निर्णय लिएको थियो । लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्न अगाडि सारिएका जायज कदमहरूको हामीले स्वागत गर्दै आएका छौं । किनभने राजधानीवासीलाई राहत हुन थाले पनि राजधानीबाहिर अधिकांश ठाउँका जनताले अझै लोडसेडिङ भोग्नु परिरहेकै छ भने काठमाडौंमा पनि आउँदो हिउँदमा लोडसेडिङ हुँदैन भनेर विश्वस्त भइहाल्ने अवस्था छैन । यसकारण एलईडीको बिक्री–वितरण गरेर विद्युत् खपत घटाउन सक्नेमा सरकार विश्वस्त छ भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ, तर त्यो कार्य प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर पारदर्शी ढंगबाट गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
एलईडी चिम खरिद प्रक्रिया अनियमितता बिना, विधिसम्मत ढंगबाट हुनुपर्छ र नागरिकले यथासम्भव सस्तोमा किन्न पाउनुपर्छ भनेर लेख्दा हामीले कतिपयको गालीगलौज, चेतावनी र धम्कीसमेतको सामना गर्नुपर्‍यो, जसबारे यहाँ धेरै उल्लेख गरिरहनु सान्दर्भिक नहोला । तर, यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिनुको अर्थ प्रश्न गर्न पाउने स्वतन्त्र पत्रकारितालाई खुम्च्याउन खोज्नु हो भन्ने कुरा सबैले समयमै बुझ्दा उचित हुन्छ । यस प्रकरणमा एकथरीको भनाइ यस्तो पनि सुनियो : लोडसेडिङ घट्छ भने अनियमितता भए पनि फरक पर्दैन । यस्तो तर्क गर्नेसँग त हाम्रो भन्नु केही छैन । हामी ती बहुसंख्यक जनतासँग सामीप्य राख्छौं, जसले लोडसेडिङ हटाउने सबै उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ, तर त्यसका लागि गरिने कुनै पनि प्रक्रिया कानुनसम्मत हुनुपर्छ भन्ने मत राख्छन् ।
कसै–कसैले भ्रम फैलाएझैं कान्तिपुर विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको विरोधी भएको पनि होइन । कुनै पनि व्यक्तिलाई तिनको कार्य सम्पादनका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ, उसले गर्ने हरेक गतिविधिमा आँखा चिम्लनु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट बुझाइ छ । जहाँसम्म घिसिङको कुरा छ, उनले विद्युत् चुहावट घटाएर, भारतबाट विद्युत् खरिद गरेर र पछिल्लो समय बनेका आयोजनाका बिजुली ल्याएर लोडसेडिङ घटाउन सके, यो व्यवस्थापकीय कौशलले उनको छवि वाचामात्र गर्ने, काम नगर्ने मन्त्री–प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि पुर्‍याएको छ । त्यसैले ‘कुशल कुलमान’ जस्ता उपमा दिँदै हामीले उनको कार्यकुशलताको प्रशंसा गर्दै अनेक सामग्री प्रकाशित गरेका हौं । यसको अर्थ सरकारी जिम्मेवारीमा बसेको कुनै पनि व्यक्ति विधि–विधानभन्दा माथि हुन्छ भन्ने होइन । एलईडी प्रकरणमा हामीले घिसिङका बारेमा केही लेखेका थिएनौं, किनभने उनी त्यो समाचारको विषय नै होइनन् । एलईडी किन्ने निर्णय घिसिङ वा विद्युत् प्राधिकरणले नभई सीधै मन्त्रिपरिषद्ले लिएको हो । सरकारले गरेको त्यो निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको तथ्यगत विवरणमात्र हामीले प्रस्तुत गरेका हौं । त्यसैले प्रश्न कार्यकारी निर्देशक घिसिङभन्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथिको हो ।
सरकारले लिएको यो निर्णय किन विधिसम्मत देखिएन भन्ने थुप्रै आधारहरू सार्वजनिक रूपमै उपलब्ध छन् । प्रथमत:, त्यो खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा हुँदैछ । राज्यकोषबाट २ अर्बभन्दा बढीको किनमेल किन सार्वजनिक खरिद ऐन छलेर बिनाटेन्डर गरिँदैछ ? यो प्रश्न जो कोही नेपालीले गर्न पाउँछ । सबैले बुझेको कुरा हो– मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने यस्ता नीतिगत निर्णयमाथि भोलि अख्तियार या अन्य कुनै निकायले अनियमितता भए–नभएको बारेमा छानबिन गर्न पाउँदैन । छानबिन र कारबाहीबाट बच्न विगतमा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवादास्पद प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याई निर्णय गरिएका उदाहरण पनि छन् ।
हाम्रो दोस्रो सवाल हो– सस्तोमा पाइन थालेको चिम किन महँगोमा किन्न खोजिएको हो ? कुनै पनि प्रविधिको सुरुवाती मूल्य निकै बढी हुने र बिक्री विस्तारसँगै त्यो घट्दै जाने बजारको सामान्य नियम हो । एलईडीको हकमा पनि त्यही हो, जो नेपाली बजारमा अहिले पनि व्यापारिक ‘कार्टेलिङ’का कारण महँगै छ, तर विदेशी बजारमा त्यसको मूल्य घट्दो क्रममा छ । भारतको सरकारी कम्पनी इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ले भारु ६५ का दरले नौ वाटको जुन एलईडी हामीलाई बेच्दैछ, अचेल उसले त्यो भारु ३८ मा किन्न थालेको तथ्य उसकै वेबसाइट र सरकारी दस्तावेजहरूबाट प्रस्ट हुन्छ । भारतका ऊर्जामन्त्रीले यो कुरा त्यहाँको संसद्लाई जानकारी दिएको विवरण पनि इन्टरनेटमा उपलब्ध छ । यस आधारमा हेर्दा ईईएसएलले खरिद गरेको म्ूल्यभन्दा ८६ करोड ४० लाख रुपैयाँ बढी रकम हामीले तिर्नुपर्ने देखिन्छ । ३८ भारु ईईएसएलले गत सेप्टेम्बरमा किनेको मूल्य हो । यो रकममा भारतको स्थानीय कर र ईईएसएलको प्रशासनिक शुल्क थपेर उपभोक्तालाई ६५ भारुमा बेच्ने गरिएको छ । नेपालमा ल्याउनु पर्दा भारतभित्रका स्थानीय करहरू लाग्दैन । सीधै उत्पादकसँग किन्दा ईईएसएलको प्रशासनिक शुल्क पनि नलाग्ने हुन सक्छ । यसबाट त्यही चिम ६५ भारुभन्दा सस्तोमा पाइने सम्भावना रहेकोतर्फ हामीले औंल्याएका हौं । र, यो कुरा हामीले मात्र नभई मन्त्रिपरिषद्को त्यो बैठकमा स्वयं केही मन्त्रीहरू र मुख्यसचिवसमेतले उठाएको विषय हो ।
ईईएसएल सरकारी कम्पनी भए पनि यसको चिम खरिद–बिक्री प्रक्रिया भारतभित्रै पनि विवादित बनेको तथ्य बिर्सन मिल्दैन । बुझ्नुपर्ने के हो भने ईईएसएल आफैं एलईडी उत्पादक कम्पनी होइन, उसले अन्य बिक्रेता कम्पनीसँग किनेर त्यो वस्तु नेपाललाई बेच्न लागेको मात्र हो । यस अर्थमा ईईएसएलको भूमिका कतैबाट किन्ने र कसैलाई बेच्ने बिचौलिया एजेन्सीको जस्तो हो । सामान्य चिमसमेत भारत सरकार र उसमातहतको कम्पनीमार्फत किन्ने निर्भरतामुखी नीति नेपालले लिएको छ, सीधै उत्पादक कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गराएर सस्तोमा खरिद गर्नेतिर पहलै गरेको देखिन्न । विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा गराउन थालेको यसअघिको टेन्डर प्रक्रियालाई बीचमै छाडेर मन्त्रिपरिषद्बाट राजनीतिक निर्णय लिइनुको कारण सायद यो पनि होला । राष्ट्रको ढुकुटीबाट अतिरिक्त खर्च गर्ने र अनियमितताको आशंका गराउने राजनीतिक नेतृत्वको निर्णयप्रति प्रश्न गर्न पाइने कि नपाइने ?
यी सबै प्रश्न गर्दागर्दै पनि हाम्रो भनाइ हो– अहिलेको मूल प्रश्न देशलाई कसरी लोडसेडिङमुक्त गराउने भन्ने हो । यसको दिगो आत्मनिर्भर उपाय भनेको सुस्त गतिमा बनिरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनु हो । तत्काललाई एलईडी चिम ल्याएर लोडसेडिङ घटाउने योजना सही र व्यावहारिक हुन्छ भने त्यसमा पनि ढिलाइ गर्नु भएन । २ करोडले पुग्दैन भने ४ करोडवटा चिम ल्याए पनि हुन्छ तर त्यो प्रक्रियासम्मत ढंगले कम पैसामा किनेर ल्याउनु पर्छ र जनतालाई सकेसम्म सस्तोमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । जिम्मेवार ओहोदामा बसेका मानिसहरूले दोषारोपण गरेर या कसैलाई आक्षेप लगाएर समाधान निस्कँदैन । यसका लागि सबैले आ–आफ्नो दायरा र दायित्व इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ ।